Manararaotra ny pesta? : tsy mitsaha-miakatra ny vidim-bary | NewsMada
Manararaotra ny pesta? : tsy mitsaha-miakatra ny vidim-bary
Tsy voafehy mihitsy! Araka ny efa taterina eto matetika, tsy voafehin’ny fitondrana mihitsy ny fidangan’ny vidim-piainana, azo ampitoviana amin’ny fitombon’ireo maty sy mararin’ny pesta eto Madagasikara. Hanamarinana izany, tafakatra 2.300 Ar indray ny kilaon’ny vary gasy, ny faran’ny herinandro teo, raha mbola 2.200 Ar ny herinandro lasa. Mitovitovy amin’io koa ny makalioka, ary misy koa sahy mivarotra 2.400 Ar ny kilao. Tsy mifanalavitra amin’ireo ny vary hafarana avy any ivelany, amidy 1.800 Ar ny kilao, na lazaina fa nanafatra 150.000 t aza ny fitondrana sy ny mpandraharaha.
Tsotra ny ambaran’ny mpivarotra mpaninjara fa avy any amin’ny mpamongady mihitsy io fisondrotana io. Ailik’ireto farany fa ny mpanangom-bokatra indray anefa ny mampiakatra ny vidiny, ary voalaza fa mihakely ny tahiry avy any amin’ny tantsaha.
Tsy miantraika any amin’ny mpanjifa
Fanaon’ireo voatanisa ireo hatrany ny mifanilika andraikitra toy izao ary mitazam-potsiny ny fanjakana. Tsy voatanisa eto intsony ny fidinan’ny fitondrana any Toamasina mifampiraharaha amin’ny mpandraharaha mpanafatra vary avy any ivelany. Midina eny amin’ny tsenan’Anosibe, mijery ny vidim-bary eny an-toerana. Hatreto zary fisehosehoana ihany izany rehetra izany fa tsy miantraika any amin’ny mpanjifa.
Na sasanangy samy manana ny azy aza ny vidim-bary sy ny firongatry ny pesta, mety misy ny mpanararaotra satria variana any amin’ny firesahana sy fiatrehana ny pesta ny fiarahamonina samihafa ka tsy mahatsapa fa misoko miadana ny fisondrotry ny vary, 100 Ar isan-kerinandro.